ကျတော်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျတော်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ
Posted by bigchef on May 7, 2012 in Copy/Paste |6comments
ကျတော် ဒီပိုစ့် ကို ရေး ရ တာ ခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ.လူ မျိူးရေး ဆိုတဲ့ စည်းကမ်း ချက်နဲ့ငြိ မလား မသိဘူး.
ဘာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေး ချ လိုက်ပြီ. ဘာသာရေး မုန်းတီး မှု တော့ အ လျင်း မရှိပါဆို တာကို တော့ကြို ပြော ထား ပါ ရစေ။
ခုတလော fb ထဲမှာလဲ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်းတွေကို တော်တော်များများ ဖတ်နေရတယ်. Voa က ဦးသန်းလွင်ထွန်း က ဝါ ကာအူဒင်း နဲ့ တွေ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ promotion တွေလုပ်.ဒေါက် တာ အာ နီ က လည်း ရို ဟင်ဂျာ ကို လက်မခံရင် နီ ယို ဖက်ဆစ်တဲ့.ဝေနှင်း ပွင့်သုံ ကလည်း သူတို့ အ မျိုး တွေ အခွင့်အ ရေးအတွက်ဆန္ဒတွေပြ။ အို အားလုံးကိုရှူပ်နေတာပဲ။
နောက်ပြီး fb ပါ် မှာ တွေ့ရ တဲ့ status တွေ နဲ့ commet တွေ က လည်း ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်း ရင်းသား မ ဟုတ်ကြောင်းန ဲ့ ဝိုင်း ဆဲနေ ကြတာပဲ တွေ့ ့ရတယ်။ဘာ အ ဖြေမှလဲ ထွက် မလာ ဘူး။ကျတော် တို့ တခုခု တော့စဉ်းစား ရ ပါ မယ်..
ရိုဟင် ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ် ကြောင်း ပဲ ငြင်း နေလို့ က တော့ ဘာအဖြေမှထွက်လာ မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ဟို တလောက သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်မယ်ဆို ပြီးငြေညာလိုက်ရော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ တစ်သန်း လောက ်ရှိ မယ် ဆိုတဲ့့အ သံကထွက်လာရော။ အား ပါး ပါး ။ အဲ ဒီ လောက် တောင် များ တယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲ မှာ ရှိ နေတဲ့ တချို့ ပင်မ တိုင်း ရင်း သားတွေ တောင် တစ်သန်းမရှိဘူး ထင်တယ်။
ဒီ လူတစ်သန်း ကို ကျတော် တို ့က တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရမယ် ဆိုရငိ တော့ တ ကယ် မလွယ် ကျောပါ။ဘယ်လောက်တောင် စီမ့် ဝင်နေမှန်းမသိတဲ့ လူဦးရေ တွေ ကိုအစိုးရ က သေသေချာချာ စီစစ်သင့် ပါတယ်။
ကျတော့ အ မြင် အရ ပြောရရင် ကျတော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ရို ဟင် ဂျာ များ ရှိနေသည်ကို လက်ခံ နိုင် ပါသည်.သို့ သော်တိုင်းရင်းသား အဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ ခိုလှုံသူ များ အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ပေး နိုင်သည်။ရိုဟင်ဂျာ အ မည်ခံ ဘဂ`်လီများ ကလည်း ထိုသို့ ့လက်ခံ နိုင်ရမည်။ထို သို့ မဟုတ်ပဲတိုင်း ရင်း သား တိုင်း ရင်း သား အ ဖြစ်သတ် မှတ်ပေး ရန်တကျီကျီ တောင်း ဆို နေပါ က ပြသနာ ပြီးဆုံးတိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူလို့ တိုင်း ရင်းအ ဖြစ် မသတ် မှတ် ပေးနိုင်တာလားဟု စောဒက တက်စရာရှိလိမ့် မည်. ဥပမာ တခုပေးပါမည်။ကျတော် သည် ကူဝိတ်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ် ကိုင် ခဲ ့ဘူး ပါ သည်။ကူဝိတ် နိုင်ငံ သည် ကမာ့္ဘ ရေ နံ အ ထွက်ဆုံ့း စာရင်းထဲ တွင် ပါဝင်သော ကြောင့် ချမ်း သာကြွယ်ဝ သော နိုင် ငံ လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ထို နိုင် ငံရှိ နိုင် ငံသား များ သည် ဘာ အလုပ်မှလုပ်စရာ မလု အောင် အစိုးရကလစဉ် ပုံ မှန် ထောက်ပံ့ ကြေး ပေးထား ပါတယ်။ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံသား ဖြစ် ချငိ သူတွေ တော် တော် များ သည်။အထူးသဖြင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံသား များ နှင့်သွေ နှောကာ မွေးဖွား လာသောကူဝိတ်ကပြား များ ဖြစ်ကြသည်။ထိုသူတို့က က သူတို့ကို ကူုဝိတ်နိုင်ငံသားများ အ ဖြစ်သတ် မှတ်ပေး ရန် အ မြဲတမ်း ဆန္ဒပြ ကြသည်။ကူဝိတ် အ စိုး ရ က လည်းဘယ်တော့ မှ အလျော့ မပေး။ မီးသတ်ပိုက်နှင့်အ မြဲ တမ်း လူစုခွဲကာ နှိမ်နင်း သည်။သတင်းစာများတွင်လည်း ထိုသူများ ကို stateless များ ဟု ကင်ပွန်း တတ်ထား သည်။ ဘာသာတူ လူမျိူး တုူတာတောင် နိုင်ငံသား အ ဖြစ် လက် မခံ န်ုင်သော အ ခြေအ နေမျုူိးတွင် ရိုဟင် ဂျာ ကိစ္စကိုတိုင်း ရင်း သားအ ဖြစ်ဘယ်လို လက်ခံရမည်ကို မစဉ်းစားတတ်ပေ။ဘာသာရေး က ဘာသာရေး ပါ။အ မျိုးသား လုံခြုံ့ရေး က နိုင်ငံသားတိုင်း ရဲ့ တာဝန်ပါ။ အစိုးရ က ပို ပြီး တောင်တာဝန်ယူ ရပါလိမ့်မယ်။ဟိုဘက်မှာ လူ ဦး ရေ ပေါက်ကွဲပြီး နေစရာမရှိတိုင်း ကိုယ် ့နိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့ သုူတိုင်းကို လက်ခံရ မယ် ဆို ရင် တော့ မြန် မာ လူ မျိုး တွေ အတွက် နေ စရာ တောင် ကျန် မှာ မဟုတ် ဘူး။
နောက် ပြီး မြန် မာ ပြည်တွင်း မှာ ရှိတဲ့မြန်မာ မွတ်ဆလင် တွေကိုနည်းနည်းတော့ မေတာ္တ ရပ်ခံ ချင် ပါတယ်.ဒီမြေ မှာမွေး ဒီရေ ကိုသောက်ပြီး ဒီနိုင်ငံ ကိုနည်း နည်း တော့သစ္စာ ရှိ စေ ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို မြန်မာတွေ က မ မုန်း ပါဘူး. မမုန်း လု်ိ့ဘဲခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံမှာ စီးပွားရှာ ပြီး ကြီး ပွား နေနိုင် ကြ တာ ပေါ့။ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ကို လည်း ဘာ ဘာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး ခွ ဲခြား မြင် စေချင်ပါတယ်။ ထို့ နည်း တူ စွာ ကျတော်တို့ မြန်မာများကလည်း ဘာသ ရေး နှင့်ရိုဟင် ဂျာ ကို တွဲမမြင် စေချင်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာများ အနေနှင့် လည်း မဖြစ်နိုင်တာ ကြီး ကို ှဇွတ်အ တင်း မတောင်း ဆို စေချင်ပါ။လူ့ အ ခွင့် ရေး ၊ နိုင်ငံသား အခွင့် အ ရေး ကု်ိ တော့ မြန်မာ ပြည် မှာ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ရမှတောင်း ပေတော့။တိုင်း ရင်း သားစစ်စစ် တွေတောင် ကိုယ်ပိုင် တန်း တူ အ ခွင့် အ ရေး အ တွက်တိုက် ပွဲဝင် နေရ တုန်းပါ။အဲ ဒီ တော့ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်ချမ်း လေး နေ ပေး ကြ ပါ။ ပြသနာ မရှာကြပါနဲ့ လို့မေတ္တာ ရပ်ခံ ပါ ရစေ။
မှတ်ချက် ။လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲ နိုင်ပါသည်.
တဂျီး ရေ copy မဟုတ်ပါ. ရင် တွင်း ဖြစ်ပါ. ပြင်ပေး ပါ အုံး။
ကော်ပီဆိုရင်ဒေါ့ ဆော်ဘီသာမှတ် ဂုဒေါ့ တော်ကီပွားရသေးဒါပ..
မှံအိ ဟုပ်ဤ့… ဘာသာ မဘာသာထက် သူရို့တွေ သန်းချီရှိနေဒါ ပတ်သနာ… လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာ အစောပိုင်းကာလဂ ခရစ်ယာန်ဦးရေ အများစု၊ နောက်ပိုင်းကြတော့ အနှီမွတ်စလင်များ စက်နဲ့ထုတ်တဲ့အလား မွေးထုတ်လိုက်ကြတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်နဲ့ သူတဝက်ကိုယ်တဝက် ဖြစ်သွားဒယ်။ ရလဒ်က ဘာလဲသိလား ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လေရော့သတီး… သဂျီးဂဒေါ့ ဒေါ်လာတသိန်းမရဒေါ့မှဆိုးလို့ ဒေါကီးနေဒါ့မှာဘဲ။ ပြေးဘီဗျို့… ဒက်ကလုပ် ဒက်ကုလပ်.. မြန်မြန်ပြေးဘာဟ ဖေ့သားဂျီးဂျော်နီရ.. အသေခံဗုံးခွဲသမားဒွေ လိုက်လာရင် ဒုက္ခ…။
At 1980-81, that population is about 1 and half lac/lakh.
လူ ၁သန်း ဆိုရင်တော့ တော်တော် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အရေ အတွက် ဖြစ်နေပြီပဲ။
ခုနေတော့ ၁ သန်းပေါ့ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ နောက်၅ နှစ်လောက်ကြာရင်၂ သန်းလောက်ဖြစ်လာ
လိမ့်မယ်..ဟွန်း။ ခုတောင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိန်းခလေးတွေ ကုလားမယားငယ်တွေ ဖြစ်နေတာအများ
ကြီးပဲ ပြောရတာမုန်း ထှာ… တော်ပြီ။
“မြေမြိုလို့လူမျိုးမပျောက် လူမျိုးမြိုမှလူမျိုးပျောက်”တဲ့ ကြားဖူးတဲ့စကားပါ၊